chaja ikuku, chaja ngwa ngwa maka gam akporo - Lantaisi
Lantaisi / Asambodo
A na-enyocha ụlọ ọrụ mmepụta ihe anyị dị ka onye na-emepụta Apple MFI kwadoro. N'otu oge ahụ, anyị bụ onye nrụpụta WPC na USB-IF. Ọtụtụ n'ime chaja ikuku anyị agafeela Qi, MFI, CE, FCC, asambodo RoHS.
Nleba anya nke Lantaisi
Ndị otu Lantaisi na-achụso ngwaahịa dị elu, enweghị ntụpọ, ngwaahịa nchekwa na gburugburu ebe obibi. Na-emesi ndị ahịa obi ike bụ nkà ihe ọmụma azụmahịa anyị, yabụ anyị nwere njikwa njirimara ngwaahịa siri ike.
Lantaisi / Mmepe oru ngo
Sistemụ Chain Ọdụdọ Lantaisi
Anyị nwere usoro ihe atụ zuru oke: SMT, R & D akụrụngwa, akụrụngwa mmepụta, nchekwa na njem, wdg.
Lantaisi / Nka na ụzụ
Anyị nwere ọkachamara ngwaahịa imewe na R&D otu, na ịmụta elu na ọnwụ-ọnụ ngwaahịa technology. Anyị na-ejere ụlọ ọrụ ozi n'ụwa niile n'ikwekọ na ụkpụrụ teknụzụ na-agbatị na ịdị mma.
A na-enyocha Shenzhen LANTAISI Technology Co., Ltd dị ka onye Apple so na MFI onye nrụpụta. N'otu oge ahụ, anyị bụ onye nrụpụta WPC na USB-IF. Ọtụtụ n'ime chaja ikuku anyị agafeela Qi, MFI, CE, FCC, asambodo RoHS.
Ụdị chaja ikuku ikuku na desktọpụ nwere asambodo MFi...
Kwuo ụdị chaja ikuku SW16
Ụlọ akụ ikuku magnetik PBW01
15 ~ 30mm Ogologo chaja ikuku ikuku LW01
Kwuo ụdị chaja ikuku ikuku DW08
Kwuo ụdị chaja ikuku ikuku AW01
Chaja ikuku ikuku na desktọpụ AW01
Nwalee & Nyochaa
Disemba 01, 2021
Chaja ikuku nwere ike imebi ekwentị? Azịza ya bụ N'ezie Mba. N'oge a, ugboro na ndabere nke ekwentị mkpanaaka na-arị elu na elu. Enwere ike ịsị na "ọ na-esi ike ịkwaga n'enweghị ekwentị." Mpụta nke chaja ngwa ngwa emeela ka c...
Nọvemba 26, 2021
Enweghị chaja n'igbe ahụ? Ihe niile ịchọrọ ịma gbasara ịchaji iPhone 12 na 13 Apple iPhones kacha ọhụrụ anaghị eji ihe nkwụnye ọkụ ebu ụgbọ mmiri, mana ha na-akwado chaja MagSafe ikuku nke Apple. Ma ị na-eji eriri ma ọ bụ na ị naghị, ndị a bụ ụzọ kachasị ọsọ iji chajịa iPhone 12 na ...
Nọvemba 22, 2021
Kedu ihe kpatara chaja ikuku ji na-acha uhie uhie? Ìhè na-acha uhie uhie na-egbuke egbuke na-egosi ihe iseokwu na ịchaji, nke a nwere ike ịkpata ya site n'ụdị dị iche iche. Biko lelee azịza ndị dị n'okpuru. 1. Biko lelee ma etinyere etiti azụ ekwentị n'etiti chaja ikuku...